कुण्डलीको यी योगले मानिसलाई बनाउँछ धनी वा गरिब, जान्नुहोस् तपाई कति भाग्यशाली हुनुहुन्छ ? –
January 23, 2022 January 23, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on कुण्डलीको यी योगले मानिसलाई बनाउँछ धनी वा गरिब, जान्नुहोस् तपाई कति भाग्यशाली हुनुहुन्छ ?
काठमाडौ । संसारमा हरेक मानिस धनी बन्न चाहन्छ । यसका लागि उनी दिनरात मिहिनेत गर्छन् । यद्यपि, सबैले समान परिणाम प्राप्त गर्दैनन्। कोही धेरै मिहिनेत गरेर पनि गरिब रहन्छन् र कोही थोरै परिश्रम गरेर पनि धेरै पैसा कमाउँछन् र पैसाको कुनै कमी हुँदैन। ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डलीमा रहेका केही यस्ता योगको बारेमा बताईएको छ,।
जसबाट व्यक्ति धनी बन्ने वा नबन्ने तय हुन्छ । वा उनीहरुको लागि कुन व्यवसाय शुभ छ, जसमा उनीहरुले मिहिनेत गरेर धेरै पैसा कमाउन सक्छन् । ज्योतिषी डा अरविन्द मिश्राबाट जानौं राशिफलमा रहेका यी योगहरूबारे।।।
अ’प’ह’रण परेकी सुजिता भण्डारीको श’व झा’डिमा फे’ला ( भिडियो सहित)
July 5, 2021 खबर समृद्ध
बिहे गरेर आफ्नै हातले कन्यादान दिन्छु भनेर किन स,पना देखायौ बाबा भन्दै भ’क्क’निइन् खु’इली(भिडियो हेर्नुहोस्)
September 1, 2021 September 1, 2021 खबर समृद्ध
October 25, 2021 खबर समृद्ध